Category Europe – Cayaaraha dunida
May 25 2017 Kooxda Manchester United ayaa 2-0 ku dibrisey kooxda Ajax oo ay la ciyaaraysay final-ka Europa League oo ku qabsoomay gegada Friends Arena ee Stockholm iyadoo sidaa ugusoo baxday Champions League. Garoonka Friends Arena ee Stockholm, ayaa daqiiqad u aamusay qarixii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester, waxaase murugadaas farxad ku More...
19 05 2016 Kooxda Kubada Cagta Sevilla ee dalka Spain ayaa dhegaha ka Garaacday koobkiina ka Xoogtay Liverpool kadib markii ay kaga badiyeen 3-1 Waxaana Gool ay lahormareen Liverpool loogu Badalay 3 Gool qaybata More...
13 11 2015 Magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa waxaa lagu sameeyay Qori tuurka koobka Qaramada Yurub ee EURO 2016-ka kaas oo bisha Juun ee sanadka dambe ka furmi doona garoomo ku yaal gudaha dalka Faransiiska More...
27 08 2015 Xidiga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa markii labaad ku guulaystay abaal marinta Xidigii Yurub ugu fiicnaa xili ciyaareedkii 2014/15. Messi ayaa abaal marintan ku garaacay More...
12 08 2015 Kooxaha Barcelona iyo Sevilla ayaa xalay waxaa dhex martay ciiyaartii ugu xiisaha badneyd muddo dhowr bilood ah, kaddib markii labada kooxoodba ay barbaro ku dhameysteen xilligii loogu talo galay ciyaarta More...
Michel Platini oo niyad jabiyay Blatter: Waxaan codka siin doona Amiir Ali Al Hussien.
28 05 2015 Madaxwaynaha xiriirka kubadda cagta yurub ee UEFA ayaa muujiyay sida uu uga soo horjeedo in Blatter uu markale dib ugu soo laabto jagada madaxtinimo ee FIFA. Michel Platini ayaa sheegay inay codkooda More...
24 04 2015 Labada kooxood ee reer talyaani Napoli iyo Fiorentina ayaa kala badbaaday, waxaana suuragal ah iney labaduba seegaan imaanshaha finalka, sidoo kalana waa suuragal in midkood ama labadaba ay final gaaraan. Kooxda More...
22 04 2015 Halyaygii iyo tabababarihii hore ee xulka qaranka Argentina ee Diego Maradona ayaa tababaraha Manchester United Louis Van Gaal Ku tilmaamay inuu shaydaan la mid yahay isaga oo ka cadhaysan in aanu xidig More...